Abavelisi beTshintsho oluLula ngokuLawulayo kunye nabaXhasi - iTshintsho eliLula eliTshintshiweyo lase China
ES420-26P-POE L2 iGigabit yoLawulo olulula yoTshintsho lokuFikelela kwe-PoE
I-ES420-26P-POE yimveliso elawulwayo yeGigabit elawulwa yi-PoE Ethernet eveliswe yi-DCN, ebonelela nge-24 10/100 / 1000Mbps RJ45 kunye ne-2 Gigabit SFP port, izibuko ngalinye lixhasa umsebenzi ozenzekelayo we-MDI / MDIX, kwaye unokufikelela kwisantya sokuhambisa ngocingo. Onke amazibuko angama-24 axhasa umsebenzi we-PoE ohambelana nomgangatho we-IEEE 802.3at kwaye ubuyela umva ngokuhambelana ne-802.3af. I-ES420-26P-POE inokusetyenziswa njengezixhobo zokufumana amandla, kwaye inokubhaqa ngokuzenzekelayo ichonge isixhobo esihambelana namandla kunye nonikezelo p ...
ES420-10P-POE L2 Ulawulo olulula loLawulo lwe-PoE
I-ES420-10P-POE inokubonelela nge-8 * 10/100 / 1000M auto MDI / MDIX function kunye ne-2 * SFP port enokuqonda ukuhambisa isantya socingo. Siswiti esipheleleyo se-Gigabit Layer 2 solawulo lwenethiwekhi eyilelweyo eyenzelwe ukuphucula iimfuno zentsebenzo yokufikelela kwiGigabit, njengeWIFI AP, ikhamera ye-IP, ifowuni ye-IP kunye nezinye iintlobo zezixhobo. Ine-8 epheleleyo yeGigabit RJ45, kwaye inokubonelela ngesicwangciso esiliqili seQoS, imisebenzi ye-VLAN etyebileyo kunye nolawulo olulula kunye nolondolozo, zonke iimpawu m ...